Zviuru Zvakabatiswa seMweya Airlines Inomisa Angangoita mazana matatu Ekuenda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Zviuru Zvakabatiswa seMweya Airlines Inomisa Angangoita mazana matatu Ekuenda
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
American Airlines yakanzurawo ndege dzinopfuura mazana mashanu uye dzimwe 500 dzakanonoka nekuda kwedutu remavhiki uye "matambudziko anoshanda."
Vapfuuri vakanamatira panhandare dzendege dzeFort Lauderdale, Miami, Houston neSan Juan.
Air Airlines yakanzura 261 ndege nhasi.
Air Airlines yanonoka ndege zana nemakumi matanhatu nhasi.
Zviuru zvevafambi vakadzikira nhasi panhandare dzendege muFort Lauderdale, Miami, Houston, neSan Juan muPuerto Rico, mushure Mhepo YeMhepoyakamiswa kana kusendesa ndege dzinosvika mazana matatu.
Maererano neshoko renhandare yendege, "nhevedzano yemamiriro ekunze uye zvinetswa zvekushanda" zvakakonzera kukanganisa kwekufamba.
Vapfuuri vakataura maawa ekumirira mumutsetse wekudzoserwa uye kumwe kubatsirwa kwevatengi kunhandare dzendege. Vamwe vafambi vakadzikira vakadzika musasa.
Sangano reFlight Attendants-CWA rakaburitsa chirevo, richiti "hurongwa hwemwedzi hwachinja," uye kubuda kweIT, pamwe nemamiriro ekunze, zvinogona kunge zvakakonzera kudonha kwekushanda kweSpirit Airlines.
Vatakuri veUS vakatambura kuti vachengetedze huwandu hwevashandi mushure me COVID-19 yakaderedza purofiti.
Florida -based Spirit Airlines yakanga yakanzura ndege mazana maviri negumi nenomwe uye makumi maviri nendege dzakange dzanonoka Muvhuro kusvika 261:120 pm ET.
Sezvineiwo, Mhepo Airlines yaive kure neyendege chete yekunetseka nezuro nanhasi.
American Airlines vakabvisawo ndege dzinopfuura mazana mashanu uye dzimwe 500 dzakanonoka nekuda kwedutu remavhiki uye "matambudziko anoshanda."